Factoids စျေး - အွန်လိုင်း FCT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Factoids (FCT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Factoids (FCT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Factoids ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $23 730 569.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Factoids တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Factoids များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FactoidsFCT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.71FactoidsFCT သို့ ယူရိုEUR€1.45FactoidsFCT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.31FactoidsFCT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.56FactoidsFCT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr15.29FactoidsFCT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.10.8FactoidsFCT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč37.91FactoidsFCT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.39FactoidsFCT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.27FactoidsFCT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.39FactoidsFCT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$38.23FactoidsFCT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$13.26FactoidsFCT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$9.3FactoidsFCT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹127.88FactoidsFCT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.288.05FactoidsFCT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.35FactoidsFCT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.6FactoidsFCT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿53.15FactoidsFCT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥11.86FactoidsFCT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥182.73FactoidsFCT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2024.35FactoidsFCT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦655.71FactoidsFCT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽126.24FactoidsFCT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴47.07
FactoidsFCT သို့ BitcoinBTC0.000148 FactoidsFCT သို့ EthereumETH0.00446 FactoidsFCT သို့ LitecoinLTC0.0315 FactoidsFCT သို့ DigitalCashDASH0.0188 FactoidsFCT သို့ MoneroXMR0.0192 FactoidsFCT သို့ NxtNXT133.42 FactoidsFCT သို့ Ethereum ClassicETC0.252 FactoidsFCT သို့ DogecoinDOGE493.62 FactoidsFCT သို့ ZCashZEC0.0208 FactoidsFCT သို့ BitsharesBTS52.69 FactoidsFCT သို့ DigiByteDGB54.73 FactoidsFCT သို့ RippleXRP6.07 FactoidsFCT သို့ BitcoinDarkBTCD0.059 FactoidsFCT သို့ PeerCoinPPC5.67 FactoidsFCT သို့ CraigsCoinCRAIG779.39 FactoidsFCT သို့ BitstakeXBS72.94 FactoidsFCT သို့ PayCoinXPY29.86 FactoidsFCT သို့ ProsperCoinPRC214.62 FactoidsFCT သို့ YbCoinYBC0.000919 FactoidsFCT သို့ DarkKushDANK548.95 FactoidsFCT သို့ GiveCoinGIVE3704.87 FactoidsFCT သို့ KoboCoinKOBO389.7 FactoidsFCT သို့ DarkTokenDT1.58 FactoidsFCT သို့ CETUS CoinCETI4940.53
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 13 Aug 2020 00:00:03 +0000.